Oge: Ezigbo Web, Mobile na Tablet Prototypes | Martech Zone
Oge Prototyper -enye gị ohere iru kenkwukorita ọgaranya web, mobile na mbadamba wayaframes. Justintime Prototyper na-enyere aka ịmepụta mmegharị mmekọrịta na mmegharị ahụ na mmetụta dị egwu. Nwere ike ịdepụta ngwa ngwa data na-eweta data ma mepụta nkwado na-enweghị otu akara koodu. Lelee ihe atụ nke Prototyper na saịtị ha.
Justintime Prototyper atụmatụ:
Mobile Ngwa Prototypes - Nwee obi ụtọ na ị na-eji ngwa arụ ọrụ mkpanaka gị rụọ ọrụ nke ọma mana ọ dị mfe iji mepụta mmegharị, ntụgharị, nsonaazụ yana ọbụlagodi ịmeghachi omume. Ma inwere ike nwale nnwale ha n’ekwentị.
Njikọ Aka mere Mfe - Kwusaanụ, kesaa ma nweta nzaghachi bara uru sitere n'aka ndị ọrụ na ndị ahịa wee mee ka ndị otu gị niile na-arụ ọrụ n'otu ụdị ahụ n'otu oge. Gaghị achọ itinye ụdị sava ọ bụla.
Ngwa-Prototyping Ngwaọrụ niile - Justinmind na-enye usoro mmekọrịta na wijetị zuru oke maka ngwa weebụ kamakwa maka ndị isi egwuregwu na oghere ngwa mkpanaka: iPhone, iPad, Android na Windows Phone.
Justintime na-enye kwa ọnwa, kwa afọ na akwụkwọ ikikere na-adịgide adịgide yana ụdị akwụghị ụgwọ. Budata ụdị gị now.
Tags: ụdị droidmmekọrịta wayaframeiOS prototypeogeprototype mkpanakaprototypeprototyperntanetị ngwa ngwawindo prototypewaya